Isoftware | Iintaba ezinkulu, iJizera ezintabeni, iParadesi yaseBohemi
I-Microsoft ilungiselela ngokuzenzekelayo ukuhlaziywa okukhulu kwi-Windows 10 kwinkqubo yokusebenza. Kufuneka kuvelise inani lezinto eziphuculweyo kunye nezinto ezintsha kwiinkqubo. Abameli be-software enkulu yase-United States abaqinisekisi ngokusemthethweni ukufika kweendaba. Nangona kunjalo, bekulokhu kusongela ixesha elithile emasangweni ukuba iMicrosoft iya kukhupha ukuhlaziywa okukhulu kwisiqingatha sokuqala sonyaka. Iindaba ziya kuba zininzi, iMicrosoft [...]
Pinnacle Studio yiprogram video ukuhlela ekuqaleni yaphuhliswa Pinnacle Systems njengoko umsebenzisi-level nogxa wayesakuba software-level professional Pinnacle kaThixo, Ulwelo Edition. It obafunyanwa ukufunda yaye kamva ngu Corel ngoJulayi 2012. Pinnacle Studio Ivumela abasebenzisi ukubhala ividiyo wevidiyo CD, DVD-Video, AVCHD okanye ifomathi Blu-ray, ukongeza kwiimenyu angqinelanayo kwaye esilondeni disc Kubo. Pinnacle Systems linikeza inkqubo iintengiso lobulungu elayinini imveliso ye Pinnacle Studio. In [...]
NgoLwesibini i17. Oktobha, iMicrosoft icwangcisa ukuqalisa abasebenzisi ngokufakela ngokufakela enye inkqubo ye-Windows 10 yokuhlaziywa komsebenzi. Okubizwa kanjalo Update Update Creators (1709 version) kuletha uphuculo oluthile kwinkqubo ngokwayo. Ukuphucula ukuhlaziya Abadali bokuwa kufuneka bakunike okanye ufake ifayile ngokwakho. Ukuba oku akukwenzeka okwamanje kwaye awufuni ukulinda, kufuneka ukuba [...]